Iingcebiso ze-Semalt kwiindlela zokusebenzisa iincatshana, i-Alt Text kunye neenkcazo zokwenza i-Business Online yakho iphumelele
Xa kuziwa ekushicileleni iwebhsayithi, ukubaluleka kweemifanekiso akunakunqandwa. Ukuqalisa umkhankaso we-intanethi, umzuzu owongezelelweyo wexesha lakho unokukuzisa iindwendwe zangempela kwaye ubambelele ingqalelo bonke abafundi bakho. Ukongeza imifanekiso ekhangayo kumxholo wakho inendima ebalulekileyo ekwandiseni ukubandakanyeka komsebenzisi kunye namava. I-WordPress inikeza abavakalisi bewebhu ithuba lokufaka imifanekiso ekhangayo kumxholo wabo. Kwakhona, ukubandakanya abaphulaphuli bakho ngokwaneleyo ngokusebenzisa iinkcazelo zeemethadatha, amazwibela kunye nemifanekiso kubaluleke kakhulu xa kuziwa kubhengezwa kwewebhu - gestion de ressources humaines application. Nantsi, uJason Adler, Semalt uMphathi weNtengo kaMthengi, unika ukuba ukhange kwizinto ezilandelayo ze-WordPress:
Xa kuziwa kukushicilelwa kwewebhu, iinccazo zibonakaliswe ngokucacileyo phantsi kweemifanekiso. Nangona kunjalo, ukufakwa kwesigcaziso kuxhomekeke kumxholo osetyenziswa ngumvakalisi. Zonke izikhundla ezidalwe ziquka ibinzana elithile elimele lihluke kwabanye. Xa kuziwa kwi-WordPress, iincwadana zongezwa ngokusetyenziswa kwezicatshulwa ezifutshane. Ukuhambisa imifanekiso eneengcaphuno kumhleli obonwayo kuyinkqantosi. Ukuhambisa iincwadana, kuya kufuneka wenze oko kwikhowudi yokungena. Ukubaluleka kweengcaphuno akukwazi ukunyanzelwa xa kuziwa kukushicilelwa kwewebhu. Ukuqaphela ukuba ungasebenzisa izixhumanisi ze HTML kwiincwadana zakho ze-WordPress nazo zibaluleke kakhulu.
Isihloko sidlala indima ebalulekileyo kwi-style = "decoration-decoration: akukho; umda wezantsi: 1px eqinile;" href = "https: // semalt..com / qa / search-engine-optimism-marketing-services.htm "> ukuthengiswa komxholo Isihloko sichaza ukuba isithuba sokubambisana siquka ntoni. Njengomvakalisi, ungasebenzisa isihloko ukukhangela ulwazi olufanelekileyo okanye imifanekiso yakho Iifayile zegalari Sebenzisa izikhetho eziphambili eziqulethwe phantsi kweenkcukacha zefayile ukufaka iimpawu zetekisi kwimifanekiso.
I-Alt Umbhalo enye inqaku elixhasayo elingaphantsi ngaphantsi kwabashicileli bewebhu. Isalathisi se-Alt akufanele sisebenziswe ngaphantsi xa kufike ekuthengiseni okuqukethwe. I-Alt Umbhalo yinkcukacha enxulumeneyo ebonisa xa umfanekiso ungaphumeleli. Nantsi imithetho elawula ukusetyenziswa kwe-Alt Text kwi-WordPress. Ukuba umfanekiso uqhotyoshelwe ngenjongo yokulungisa, iteksi ye-alt yomfanekiso ingashiywa ingenanto. Ukuba umfanekiso uqhotyoshelweyo ngenjongo yokuthetha, i-Alt Text kufuneka ichaze ngokupheleleyo umxholo othunyelwe ngumvakalisi.
Ukuba umfanekiso uhambelana nekhonkco, i-Alt Attribute kufuneka icacise ikhonkco Inkcazo njengomvakalisi; Inkcazo yinto ongeke ulahlekelwe ukuyisebenzisa. Ukuba enye yeendwendwe zakho ezinokutyelela kwikhasi leposi lenkcukacha, umveleli kufuneka abone inkcazelo yakho ende kunye nomxholo wakho. Abapapashi basebenzise inkcazo bangasebenzisa ifomathi ye-HTML baze bayijonge izithuba zabo zokuhamba ngokulula. Iimpembelelo zemethadatha kwi-intanethi yokushicilela iimpawu ze-Alt, iincwadana, iinkcazo kunye nezihloko ziyimpawu ezisetyenziswa kakhulu ngabashicileli bewebhu. I-Metadata iphucula ukubonakala kwempembelelo yakho ye-inthanethi, ithuthukisa amava akho, kunye nokukhuthaza ukubandakanya. Ngokomzekelo, ukongeza umfanekiso we-WordPress kwi-Google kunokukwenza ukuba ube nezinga eliphezulu kwiimpawu zokulungiswa. Ngokubuyisela, iindwendwe zendawo zingakwazi ukufikelela kwinkampani yakho ngokufanelekileyo. Ukuqonda ukubaluleka kweenkcukacha eziqhotyoshelweyo kunye nendlela i-WordPress isebenzisa ngayo imethadatha kunye neengcaphuno kuyimfuneko ebalulekileyo. Iinkcukacha zokuqhotyoshelweyo nazo ziyakunyaniswa kwaye zisetyenziswe xa kuziwa kubhengezwa kwewebhu. Misela iimpawu ze-alt, imetadata, amazwibela kunye neenkcazelo ngokuchanekileyo kwimikhankaso yakho yezithombe ukukhuthaza amava abasebenzisi kunye nokubandakanya